Bilillee (Mahbubaa ) intala Oromoo Bareeduman Qalbii Faranjii Fudhate – OROMP4 Studio
Maqaan warri isii moggaasaniif Bilillee dha. Kan dhalatte Oromiyaa dhihaa, naannoo Guummaa ja’amutti yoo tahu barri dhaloota isii 1820 keessa ture. Dhalattee waggaa 10 yoo guuttu, bara 1835/36 biyya isiin itti dhalattetti lolli gale. Abbaa fi obboleeyyan isii jaha lola saniin ajjeefaman. Isii fi obboleettiin isii ammo booji’amanii gabroomani gara Goondaritti geeffaman. Achitti gargar bahan san booda wal hin agarre.
Bililleen Goondar irraa dura kara Kaartum (Sudan), itti aanee kara Gibxii (Kaayiroo) bara 1837 keessa gurgura daldala gabraatiif geeffamte. Yeroo kana biyyoota bahaa daawwachuuf bara 1835 eegalee karaarra kan ture ilmi mootii Jarman, Harmaan Paklar Kaayiroo gahe. Guyyuma kana Bilillee gurguraaf gabaa baasani waan tureef, innis akkuma naatoo Bililleen qabdu arkeen bituuf itti gaggabe. Bites maqaa isii Mahbuubaa ja’ee moggaase. Hiikkaaniis Afaan Arabaatiin ‘jaalallee koo’ jachuu dha. Yeroo kaan umriin isii waggaa 10 hin caalu ture. Umriin isii xiqqaa tahullee, yaadaa fi hojiin isii akka nama guddaa ture. Naatoo fi amalli isii akka Paklar baayyisee jaalatu taasise.
Akkuma bitateen doo’annaa isaa itti fufe, Misra irraa gara biyyoota biraa Bilillee qabatee waliin deeman. Paklar haadha mana isaa Jarman jirtuuf waa’ee gabroota Misraa bitee xalayaa barreessseefi ture. Waa’ee Bililleetiis jaalala isii qabu fi isiinis isaan gargar baatee jiraachuu akka hin dandeenye deddeebisee barreessaaf ture. Mahbuubaan dubaarti iftoominaa fi haqummaan guutamtee dha. Paklar haqummaa fi iftoomina Mahbuubaa irraa ka’e, “Nama dhugaan wajjiin jirtu wajjiin ooleen yeroo baayyee booda nama dhugaa tahe.” Ja’a ture.
Paklar fi Mahbuubaan bara 1840 gara Awuroppaa deebi’an. Bililleen yeroo kaan dhukkuba sombaa fi heexoo isii qabee dhukkubsattullee Paklar Muskatti isii dhiisee gara Barlin haadha mana isaa tan dhukkubsattu laaluuf kute ture. Yeroo kana Mahbuubaan dardara biyya isii Oshuu Aagaa wajjiin wal barte. Isa irraan hayyicha biyya Jarman kan Afaan Oromoo qoratu, Karl Tutischek waliin wal barte. Bililleen dandeetti walaloo barreessuu fi sirbuutiis waan qabduuf, Karl Tutischekiis sirba isiin Afaan Oromootiin sirbite galmeessee ka’ee jira.
Dhukkubiin itti cimaa waan deemteef xalayaa Paklariif barreessuullee hin dandeenye. Doktorri isii barreesseefii ergite. Paklariis haati mana isaa tan duraa baayyee waan jalaa dhukkubsatteef dhufuu hin dandeenye. Xalayaa barreesseefi ture. Yeroo booda xalayaa rakkina isarra jiru barreessee meetii maqaan “MAHBUUBAA” ja’u irratti became waliin ergeef. Yeroo xalayaa fi meetiin Onkololeessa 27, 1840 Muskaa gahu, Bililleen arguu hin dandenye. Hirriiba dhuma hin qabneen moohamtee, addunyaa kana irraa boqotte.
Aniis Bareedduu Oromoo fakkii bareedina addunyaa taatee tana biyyee irraa haa saphlisuu jachaa, dinqiisifannaan isiif qabuu walaloo gabaabduu armaan gadii kanaaniin xumura:-
Yaa takkitti Oromoo hambaa seena addunyaa,
Yeroo hammaateetuu si geeyse fageenyaa,
Rabbii nu badheesee ati kennaa teenyaa,
Yoomillee sin dagatuu seenaan keenyaa.
Bilillee too yaa Mahbuubaa!
Umamni kee ajaa’ibaa, bareeni kee nama dhibaa,
Boontuu bareedduu urjii sabaa,
Oromtittii too dhiiga qulqulluu sii faaruu qabaa,
Siin faarfadhaa, siin leellifadha akka jabaa.
Luucaan rifeensaa keetii gad bu’ee mudhiirra ciisaa,
Nyaarri kee kuulaa ijji tee goobanaa bakkalcha bariisa,
Dhaabbanni kee looshaa akka harooreeysaa,
Ilkaan kee caama naanaa addeenyi isaa,
An maal himeetiin maalumaa dhiisaa,
Bareenni kee ifa aduu golgoleessaa.
Biftii kee magaalaa halluun kee buskutaa,
Bareedinaan dhugaatti abbaa feetee caaltaa,
Mil’uu ijaa qofaan nama hundaa boojitaa,
Sabboonummaa keetiis if beeytee ittiin boontaa,
Hanga ammaa waan lubbuun jirtuu na fakkaataa,
Si faarsuuf dhugaatti jechaatu natty xiqqaataa,
Afaaniif aadaa tee enyuu caalaa jaalattaa,
Bilillee too seenaa teetu garaa na nyaataa. X2